Xilibaan ka tirsan Golaha baarlamaanka DFKM oo lagu dhaaway Muqdisho
Xilibaan ka tirsan Golaha baarlamaanka DFKM ayaa saaka lagu dhaawacay magaalada Muqdisho ka dib markii askari ka tirsan ciidanka DFKM uu rasaas fara badan ku furay xili uu ka soo baxayey gurigiisa oo ku yaal deg mada Wardhiigley ee gobolka Banaadir. Xilibaanka la dhaawacay ayaa magaciis lagu sheegay Xassan Aadan Aalbaro.
Xilibaan Xassan Aadan Aalbaro ayaa waxaa ay rasaasta uu furay askariga ka tirsan DFKM ay ka haleeshay lugaha waxaan xiliga weerar ku uu dhacayey uu ku jiray gaarigiisa , ilaa hadda ma cada sababaha uu askarigaan ka tirsan DFKM uu u doonayey in uu qaarajiyo xilibaanka.
Ciidanka DFKM ayaa ah kuwa inta badan ay ka dhacaan falal iskugu jira boob,dhac iyo dilal ay mararka qaar kula kacaan dadka shacab ka ah gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah ,dilkii ugu danbeeyey ayaa ciidanka DFKM gaar ahaan kuwa la sheegay in ay ilaalo u ahaayeen guddoomiyaha Gobol ka Banaadir Tarsan waxaa ay dileen Wariye Xassan Xiis oo ahaa wariye u shaqayn jiray HornCabel Tv.
Ilaa hadda ma jiro war ka soo baxay masuuliyiinta Golaha Baarlamaanka DFKM oo ku saabsan weerarka loo geystay xilibaanka Xassan Aadan Aalbaro iyadoo weli ay taagantay khilaafka u dhexeeya xilibaanada DFKM.